Shan Yoe Yar Restaurant | MyLann – Online Restaurants Directory and Food Reviews in Myanmar
Food : 3.67 Decoration : 4.33 Service : 3.83
No.169, War Tan Street, Lanmadaw
အမှတ်.၁၆၉ ၊ ဝါးတန်းလမ်း
Activities on Shan Yoe Yar Restaurant
htaikseng reviewed Shan Yoe Yar Restaurant7years ago
​ဈေးကြီးတယ်​။ နိုင်​ငံခြား​ဈေးကွက်​ကို ရည်​ရွယ်​လို့ထင်​တယ်​ အရသာ​တွေက ​ပေါ့လွန်း​တော့ ရှမ်းစာ​ပေမယ့်​ မဟုတ်​သလိုဖြစ်​​နေတယ်​။
Si Thu Htut uploadedaphoto at Shan Yoe Yar Restaurant7years ago
karacy reviewed Shan Yoe Yar Restaurant7years ago
The food here is pretty authentic. they know how to bring ingredients that seem limited to life and their food is simply delicious. Loved the Ambiance. Butareminder is to putabulk of money in your clasp bag. :)
Pop Corn reviewed Shan Yoe Yar Restaurant7years ago
ဆိုင်အပြင်အဆင်က စိတ်ကိုအေးချမ်းစေတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုကလည်း တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ အစားအသောက်တွေကလည်း ကျွန်မတို့အားလုံးကိုအကြိုက်တွေ့စေပါတယ်။ အဲ့ဒိနေ့ကတော့ ဝက်နဲ့ပက်သက်တာတွေချည်း စားခဲ့ကြတယ်ဆိုပါတော့။ ဝက်အစုံသုတ်က စားနေကျတွေနဲ့မတူတဲ့အရသာကိုပေးတယ်။ ဝက်သုံးထပ်သားစတူးရဲ့ပုံစံက အရမ်းကိုဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။ အရသာကတော့ အီတယ်ဆိုပေမယ့် သူနဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့ ကြံမဆိုင်ကြောင့် စားကောင်းစေပါတယ်။ ဈေးတော့ကြီးတယ်ဆိုပေမယ့် သွားရောက်ပြီး အရသာမြည်းစမ်းကြည့်သင့်ပါတယ်။
Chue reviewed Shan Yoe Yar Restaurant7years ago
mylann uploadedaphoto at Shan Yoe Yar Restaurant7years ago
Writeareview for Shan Yoe Yar Restaurant
Report for Shan Yoe Yar Restaurant
Reserve table at Shan Yoe Yar Restaurant